I-Lasers-Pointers.com | Thenga I-Blue, Red, Violet, Green Laser Pointer
I-100mW Laser Poers
Kutholakala eGreen (532nm), Red (650nm) noViolet (405nm).
Kufika ku-4 km ibanga. Bangashisa imishini emnyama ehlukahlukene, izikhwama zodoti, ngisho namabhaluni angaqhuma.
Inconyelwe ukusetshenziswa kwe-sporadic noma kwasendlini (izethulo, amakilasi ...).
Kufika ku-8 km ibanga. Bangashisa izinto ezahlukene zemibala emnyama njengezikhwama zodoti bese kuqhuma amabhaluni.
Inconyelwe ukubonwa kwe-telescopic, izilawuli zomsakazo, ama-tripods wezithombe ...
Kufika ku-12 km ibanga. Bangashisa izinto ezahlukahlukene ngokubonga ku-focalizer yayo evumela ukugxila futhi bashintshe usayizi woxhaxha: amapulasitiki, amakhadibhodi, aqhume amabhaluni, ahambise umentshisi.
Kunconyelwe ukusetshenziswa kwangaphandle, khomba izinkanyezi, setha iphoyinti lokukhanya ebusuku bezithombe nobunye ukuhlolwa.
I-500mW Laser Poers
Kufika ku-20 km ibanga. Bangashisa izinto ezahlukahlukene ngokubonga ku-focalizer yayo evumela ukugxila futhi bashintshe usayizi woxhaxha: amapulasitiki, amakhadibhodi, indwangu, ukuqhuma amabhaluni, ukujikisa umentshisi.
Kunconyelwe ukubhula ngezinkanyezi, ukuthwebula izithombe zasebusuku, imibukiso ebonakalayo, izibonakaliso kanye nokuhlolwa.
+ 1000mW Laser Poers
Kutholakala nge-Blue (445nm).
Kufika ku-30 ​​km ibanga. Bangashisa zonke izinhlobo zezinto ngokushesha futhi ngebanga elikhulu ngokubonga okugxilwe kukho okuvumela ukugxila nokuguqula usayizi wogongolo: amapulasitiki, izindwangu, amakhadibhodi, iphepha, umentshisi, izinkuni.
Kunconyelwe ukubhula ngezinkanyezi, ukuthwebula izithombe zasebusuku, imibukiso ebonakalayo, izibonakaliso, ukuhlolwa ...
ISITOLO ESIBONAKALAYO NOKUQOPHA
UKUZIMISELA EMHLABENI WONKE